Ragdoll Turbo Dismount Apk Dhawunirodha Ye Android [Gameplay] - Luso Gamer
Pakutanga takagovana akawanda akasiyana emitambo maapplication ane hukama nekuenzanisa. Asi panguva ino takaunza chimwe chinhu chitsva chinozivikanwa seRagdoll Turbo Dismount. Iyi yemitambo app iri nyore kana zvasvika pakutamba uye haidi hunyanzvi hunyanzvi.
Playing RPG Games yaigara ichionekwa sechiitiko chakasiyana. Nekudaro, munguva yazvino, vanhu vanofarira kutamba uye kunakidzwa ne3D Mitambo. Asi kana zvasvika pakuisa maapuro anorema-basa ekutamba. Ipapo avo vanodya yakawanda nzvimbo uye zviwanikwa.
Pano tichitarisa mashandisirwo ezviwanikwa uye nzvimbo shoma yekugona. Vagadziri vadzoka neiyi nyowani yakapfava-maviri-dimension gameplay. Iko vatambi vanoda kusvetuka kubva kunzvimbo dzepamusoro uye kukonzera kukuvadza kwakawanda.
Chii chinonzi Ragdoll Turbo Dismount Apk
Ragdoll Turbo Dismount Android ndeyepamhepo uye isina simulation yakavakirwa mutambo application. Iko vatambi vanoda kusvetuka hunhu hwavo hwekutamba kubva kunzvimbo dzakakwirira. Uye kukonzera kukuvadza kwakawanda nekusvetuka munzvimbo dzakasiyana.
Mukati memitambo yakasiyana, vatambi vanoda kukurudzira kudzivirira tsaona uye kunakidzwa nemutambo wakachengeteka. Asi mumutambo mutsva uyu, vatambi vanoda kutsvaga nzvimbo dzakanakisa dzekumhara. Kana iwe ukabudirira kurovera mota yako uye kukonzera kukuvara kwakawanda.
Ipapo gamer mapoinzi anozowedzera zvinoenderana mukati mekutamba. Kunyangwe akasiyana pro maficha uye nhungamiro zvinowedzerwa uchifunga nezve rubatsiro rwevatambi. Nekudaro, avo vasingagadzikane nemagadzirirwo akasarudzika uye sarudzo dzinosvikika.
Inofanirwa kushanyira chikamu chekumisikidza uye shandura iyo default marongero zvinoenderana. Rangarira kuti vanogadzira vari kuronga kuwedzera dzimwe sarudzo nyowani uye idzo dzichawanikwa munguva pfupi. Saka iwe uchitamba mutambo nevamwe wobva watora Apk kubva pano.
zita Ragdoll Turbo Dismount
zera 50 MB
Package Zita com.vicenter.stickman.ragdoll.dismounting
Pane akawanda makiyi sarudzo akawedzerwa mukati mesetting menyu. Kunyangwe, akadaro akareruka 2D Gameplays haambopa akadai ane simba sarudzo kune mafeni. Asi panguva ino vagadziri vakafunga kurudziro yekare uye kudyara idzi dzakachena sarudzo dzakareruka.
Zvakadai seInzwi, Inononoka uye Mutauro sarudzo. Kuita kuti mutambo uwedzere kunakidza, nyanzvi dzinoisa iyi yakatsetseka kurira kwevatambi. Avo vasina kugadzikana nemadefault sound effects. Iye zvino unogona kuidzima kubva pakuseta.
Slow sarudzo inowanikwawo kudzikisa mhedzisiro uye vatambi vanogona kunakidzwa nyore nyore gameplay. Kana usiri kugadzikana nemutauro wakasarudzika. Ipapo vatambi ivavo vanogona kushandura mutauro nyore nyore kubva kune inbuilt sarudzo uye kuigadzirisa zvinoenderana.
Rangarira kuwana matombo anokosha kwakakosha uye kuona kushambadzira kwechitatu kunobatsira mukuwanza iwo. Kana iwe uchikwanisa kuwana mamwe matombo anokosha. Ipapo vatambi vanogona kushandisa izvo kuwana matombo anokosha kuvhura mota dzakasiyana, mepu uye zvinhu.
Kuti uwane mamwe matombo anokosha, mutambi anoda kukonzera kukuvadza kwakawanda mukati memutambo. Saka iwe une tarenda uye unoziva muviri vhiki mapoinzi. Wobva waisa yazvino vhezheni yeRagdoll Turbo Dismount Dhawunirodha mukati me smartphone uye unakirwe nekurovera kwakasiyana mota.
Kuisa mutambo kunopa akasiyana ekutamba mikana.
Apo vatambi vanoda kurovera muviri munzvimbo dzakasiyana.
Rangarira kuwana matombo anokosha kwakakosha.
Kuti uwane matombo zvinoda nzvimbo yakanaka yekuputsika.
Vatambi vakawanda vanokwanisa kukanganisa muviri.
Mamwe matombo anokosha achaiswa mukati meakaundi.
Iwo matombo anowanikwa anogona kushandiswa kuvhura zvinhu zvakasiyana.
Izvi zvinosanganisira Mepu neMota.
Mavara akasiyana anowedzerwawo.
Maitiro ekurodha Ragdoll Turbo Dismount Game
Parizvino mutambo wemutambo unowanikwa kurodha kubva kuPlay Store. Nekudaro, zvimwe zvirambidzo zvakakosha zvinoiswa mukati mechitoro. Nekuda kwezvirambidzo izvi, vazhinji vashandisi veandroid havakwanise kuwana yakananga Apk faira.
Saka mune ino mamiriro, isu tinokurudzira avo android gamers kushanyira webhusaiti yedu. Nekuti pano pawebhusaiti yedu tinongopa mafaera echokwadi. Kuita chokwadi chekuchengetedza uye kuvanzika kwemushandisi. Isu takahaya timu yehunyanzvi, kunze kwekunge timu ine chivimbo. Isu hatimbope iyo Apk faira mukati mekurodha chikamu.
Isu takatoisa iyo yekutamba application pane akasiyana ma smartphones. Mushure mekuisa iyo gameplay, hatina kuwana dambudziko rakananga mukati. Zvakadaro isu hatimbove varidzi vekodzero, zvakadaro isu tinogona kuvimbisa vateveri kuti yakachengeteka kutamba.
Kune akawanda akawanda emamwe simulation emitambo maapplication anowanikwa kurodha. Kuisa iwo magameplays ndapota dhawunirodha anotevera maApk mafaera. Ndivo Oiri Kuchera 3D Apk uye Pop Ninja Apk.
Saka iwe une yekare android smartphone uye haugone kutamba mutambo nekuda kwekushaikwa kwezviwanikwa uye nzvimbo. Ipapo isu tinokurudzira avo vatambi kuti vaise Ragdoll Turbo Dismount Apk. Izvo zvinosvikika kutamba mahara pasina kunyoreswa kana kunyoreswa.
DTV Mhuri Apk Dhawunirodha Ye Android [IPL IPTV's]